GPS020W - OMG 3G GPS Tracker Watch ho an'ny ankizy / zokiolona - $ 198 | Vahaolana OMG
GPS020W - OMG 3G GPS Tracker Watch ho an'ny ankizy / antitra - $ 198
Stylish 3G GPS Watch dia andiam-pandrefesana GPS vaovao miaraka amina maodely marobe GPS + WIFI + LBS, izay azo ampiasaina ho an'ny ankizy, olon-dehibe, loholona, ​​kilemaina sns sns. Miasa tanteraka amin'ny toerana rehetra eran'izao tontolo izao. Ity gadget kely ity dia tsy famantaranandro fotsiny, tracker GPS, afaka miasa koa izy ho toy ny finday afaka miantso an-tarobia! Izy io koa dia manana fitaovana, toy ny fakan-tsary, counter counter, tatitra momba ny toetr'andro, antso an-tariby, fanaraha-maso ny feo lavitra, lalan'ny làlana manan-tantara, fefy geo, fifampiresahana feo sns.
fomba Stylish Watch Design
GSM: 850 / 1900MHz WCDMA: 850 / 1900MHz (raha ilaina)
loko Black, Brown
I / O port USB seranan-tsambo
GPS mandeha 20 channel
GPS chip mandray fahatsapana Fitetezana fahamendrehana: -165dBm, fahatsapana fahamatorana: -148dBm
14916 Total Views 10 Views Today